Indlu yomndeni - I-Airbnb
I-i-guesthouse ephelele ibungazwe ngu-Vanessa E Rodrigo
U-Vanessa E Rodrigo Ungumbungazi ovelele
Indlu iseduze ne-Figueira Beach ngaphakathi kwe-Ponta do Cantador Condominium e-Angra dos Reis. Ibhishi lase-Figueira linamanzi acwebile, indawo yangempela. Ibhishi ithule kakhulu , indawo enhle yokuphumula nokujabulela ukubuka indawo. Indlu izungezwe ulwandle ngokubukeka okuhlaba umxhwele kwamakamelo okulala kanye nekhishi nendawo yokubhukuda!
Imvelo ezungezile iwumsebenzi wangempela wobuciko! Indawo ethule kakhulu, okuzwayo ukucula kwezinyoni!!!
Indlu inendawo enendawo yokubhukuda,amatafula anesambulela selanga, isihlalo sasebhishi nendawo yokosa yonke indawo ehlelelwe leyo ndawo yokosa ebheke olwandle . Ukubukeka kwendawo kuhle ! Indlu yasebhishi inekhishi elinobumnandi elinazo zonke izitsha , nesitofu, i-microwave, ifriji, itafula kanye ne-crockery. Konke ozokudinga ekhishini! Sine-Wi-Fi endaweni yokubhukuda nasemakamelweni alungele labo abafuna ukwenza ihhovisi lasekhaya noma ukufunda ku-inthanethi ebheke olwandle!!!
4.93 · 82 okushiwo abanye
Indlu iseduze ne-Figueira Beach, emafulethini e-Ponta do Cantador, eduze ne-Figueira Beach. Indawo ezungeze idolobha elikhulu inamanye amabhishi amaningana azungeze i-, kuhlanganise nesiqhingi esingaphambi kwendlu nendawo yokudlela yokudla, i-Canto das Canoas, enye yezindawo ezinhle kakhulu e-Angra. Ungabiza indawo yokudlela, uhlele itekisi yasemanzini ukuthi bathatha iklayenti emphemeni we-condominium noma i-Praia da Figueira. Umphakathi unezimakethe ezimbalwa ezincane ezihlangabezana nesidingo , futhi ezinye izimakethe ezinkulu enkabeni yedolobha ziqhele ngemizuzu engu-10 noma engu-15 ngemoto.
Ibungazwe ngu-Vanessa E Rodrigo
Silahlekelwe yizivakashi. Silandela iphrothokholi yokuhlanza ye-Covid 19 YE-AIRBNB ukuze samukele izivakashi zethu ngokuphephile. Ngisho nendawo yokubhukuda ithola ukwelashwa okufanele, ngemva kokuhamba kwesivakashi ngasinye. Sisebenza ngendlela engcono kakhulu yokuqinisekisa inhlalakahle yazo zonke izivakashi zethu.
Silahlekelwe yizivakashi. Silandela iphrothokholi yokuhlanza ye-Covid 19 YE-AIRBNB ukuze samukele izivakashi zethu ngokuphephile. Ngisho nendawo yokubhukuda ithola ukwelashwa okufa…
UVanessa E Rodrigo Ungumbungazi ovelele